Maalinta Bilayska Soomaaliya oo laga xusay Boosaaso ( Sawiro ) – Radio Daljir
Diseembar 20, 2012 4:58 b 0
Bosaso, Dec 20 – Munaasbad balaaran oo lagu maamuusayo sanadguuradii 14-aad iyo jirsigii 69-aad ee ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Bosaso xarunta gobolka Bari.
Madaxwaynaha Puntland. wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada booliska ee Puntland ayaa kasoo qaybgalay munaasabadan oo lagu soo bandhigay heeso ka tarjumayo wadaniyadda ciidamada booliska.
Taliyaha ciidamada booliska Puntland Maxamed Saciid Jaqanaf oo ka hadlay munaasbada ayaa ku dheeraaday waxqabadka iyo nidaamka ciidamada booliska Puntland, waxaana uu sheegay booliska Puntland inay ka qaybqaateen sugidda nabadgalyada, la dagaalanka tahriibta, burburinta dhismayaasha sharci darada. la dagaalanka mukhaadaraadka iyo ka hortagista dhibaatooyinka bulshada.
Waxaa sidoo kale uu sheegay sanadakan oo kaliya tababaro kale duwan in loo qabtay ciidamada booliska Puntland kuwaasi oo qaybo ka mid ah la siiyay tababaro kor loogu qaadayo xirfadooda baarista dambiyada.
Wasiirka amniga Puntland Khaliif Ciise Mudan oo hadlay ayaa hambalyo u diray guud ahaan ciidamada booliska Puntland, waxaa uu sheegay ciidamada booliska Puntland inay diyaar u yihiin ka hortagga cidksata oo cadaw kusoo ah Puntland, waxaa madaxwaynaha uu uga mahadceliyay kasoo qaybgalkiisa xuska ciidamada booliska.
Madaxwayne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo soo gabagabeeyey munaasbadda ayaa u mahadceliyay ciidamada booliska Puntland, waxaa uu ka sheekeeyey taariiqdii ciidamada boolisku soo mareen.
Waxaa uu dhalinyarada ugu baaqay inay ku biiraan ciidamada booliska oo uu sheegay dalka inay waxbadan ka qabteen, waxaa ciidamada booliska Puntland iyo Soomaaliyeed u rajeeyey inay sandaka soo socda guul ku gaaraan.
Fanaaniinta kooxda Waaberi Puntland ayaa munaasbadda intii ay socotay soo bandhigay astaamaha qaranka iyo heeso aad u xiiso badan oo siweyn usoo jiitay dadkii xafladda joogay, waxaa sheegid mudan in madaxwaynaha, wasiirada iyo saraakiisha booliska inay salaan sharaf goobta kaga qaateen ciidamada booliska.
Saraakiisha ciidamada Buuhoodle oo wacyigelin nabadgelyo ku tegey Waqooyiga gobolka Cayn ( Dhegayso).